Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Ny vatolampy no mangina na taingenan’ny vorona aza
Inty sy nday: Ny vatolampy no mangina na taingenan’ny vorona aza
Roa andro ary nifarana omaly alakamisy ny fitsidihana ara-pomba ofisialy nataon’ny filohan’ny Repoblikan’i Inda, dia i Ram Nath Kovind teto amintsika. Amin’ny maha-fitsidihana ofisialy an’izy iny dia navesatra koa ny sokajin’olona niara-dia taminy. Tompon’andraiki-panjakana ambony any Inda sy mpandraharaha ara-toekarena avy any. Dia nitokana fotodrafitrasa teto io filoha Indianina io. Fotodrafitrasa izay nambara fa vokatry ny famatsiam-bolan-dry zareo na niarahana niombona antoka tamin-dry zareo. Nisy koa ny fanolorany fitaovana sy kojakoja tamin’ny sehatra sasany teto.
Omaly moa dia nisy fiaraha-midinika momba ny tontolon’ny fandraharahana ara-toekarena eto Madagasikara izay tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miombona antoka (???) eo amin’ny firenena roa tonta. Dia ny tena no menatra.
Tetsy andaniny, nirehareha sy nizahozaho ny fitondram-panjakana Malagasy, nanomboka tamin’ny filohampirenena Rajaonarimampianina, fa nosokajian’izy ireo ho fahombiazan’izy ireo tanteraka izany rehetra izany.
Raha tsy ny mpitondra fanjakana Malagasy ve hirehareha sy hizahozaho amin’ny fahazoana fanampiana avy any ivelany? Tena maharikoriko mihitsy. Ny antoky ny fampivoarana sy fanavotam-pirenena, ny fototry ny fanarenana ny fiainam-bahoaka latsaka ankaterena sy anaty fahantrana toa izao, ny fanoitran’ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny, toy ny harem-pirenena … dia lany manta itsikombakomban’ny mpitondra amin’ny vahiny avokoa, ary iray isan’ny goavana ao anatin’izany mpitsikombakomba maloto amin’ny mpitondra fanjakana Malagasy izany ny karana na Indianina. Dia indro fa ry zareo indray no mody manome fanampiana antsika nefa ny ampahany bitika tamin’ny harem-pirenentsika norobain-dry zareo teto no entiny andatsana antsika, dia tonga amin’ilay fitenenana hoe “ny antsika ihany no anajany antsika”.
Mbola hanaiky handefitra sy hamela an’izany hitohy hatramin’ny rahoviana isika vahoaka? Aza hadinoina fa tsy ny harem-pirenentsika ihany no lasan’ny karana fa ny seha-pandraharahana avo lenta ka idiram-bola be dia eo ambany vahohony avokoa, ary ny tany izay isan’ny saro-pady amintsika Malagasy dia voaroban-dry zareo avokoa, ka hatramin’ny fasan-drazantsika sy ny faritra saro-bidy sy saro-pady amintsika no voahosihosin’ireo karana Indianina ireo hasina. “Aoka izay fa ampy izay”, satria ny vatolampy no taingenan’ny vorona ary anaovany maloto, dia noho izy mangina tsy miteny, tsy mihetsika, nefa ambara fa tsy misy lehibe sy mafy toa ny vatolampy.